Granada Noir: Alhambra na-enwekwa mmasị maka akwụkwọ akụkọ mpụ. | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Granada Noir: datebọchị dị ukwuu nke ụdị ojii na ọnwa Septemba.
El September 28 ememme amalite Pomegranate Noir, N’ebe a na-enweghị atụ nke obodo Alhambra na Albaicín. Admission bụ n'efu na nzukọ ga-adịgide ruo October 11.
Nkwado mmekọrịta, mbata na ọpụpụ, akwụkwọ Africa ma ọ bụ iji ike emegbu mmadụ dị ka isiokwu nke Ngwuregwu Egwuregwu Ndị Ntorobịa Na-eto Eto na site na nzukọ a na-eche ogologo oge nke Tony Hill nyere, ha ga-abụkwa ndị protagonists nke Granada Noir 2018.
2 Ndị protagonists:
3 Onyinye Granada:
Ememme ahụ ga-enwe ọtụtụ ọkwa. Na Roomlọ Royal nke Santo Domingo Dị ka isi nzukọ nzukọ, obodo anọ ọzọ ga-anabata mmemme a: Guadahortuna, Monachil, Zagra na Pinos Puente. Ebumnuche nke iwetara nka na akwụkwọ n’okporo ámá, a ga-eme ọtụtụ ihe Ogwe, kafe na akụkụ ndị ọzọ nke obodo.
Otutu ebe ndi Granada ga-anabata ihe omume Granada Noir.
Ndị edemede nke ojii dị ka Mabel Lozano, Ian Manook, Juan Ramón Biedma, Juan Bolea, Juan Madrid, Javier Márquez Sánchez, Fanny Beaudoin, Mercedes Suarez, Alexis Díaz Pimienta, Alfonso Salazar, ma ọ bụ Salvador Alemany na ndị omenkà sitere na ọzụzụ ndị ọzọ dị ka sinima, ihe nkiri, cabaret, egwu, ihe nkiri redio, gastronomy, akwụkwọ akụkọ, egwuregwu, ihe atụ, puppets, improvisation and photography.
Alicia Jimenez-Bartlett ga-abụ onye ọbịa nke nsọpụrụ na Granada Noir maka onyinye Granada maka ọrụ edemede ya na, ọkachasị, maka ya usoro ojii nke pụtara Petra Delicado, onye Spen nwanyị mbụ na-eme nchọpụta nke ụdị a.
Petra Delicado bụ onye nyocha ndị uwe ojii Barcelona bụ onye na-a alcoholụ mmanya, na-ese anwụrụ ọkụ, na-agụnye ọtụtụ okwu tacos ya karịa ka ọ na-eme mgbe ọ bụla na mkparịta ụka nkịtị, na-atọ ụtọ (ọ na-enwe obi ụtọ na achịcha tortilla na biya), nwere ezi uche na nnwere onwe ịtụgharị uche. Onye na-esote onye nlekọta na-esonyere ya n'okwu ikpe ya bụ onye na-esote onye nyocha bụ Fermín Garzón, nwoke na-agba akwụkwọ ma dị mfe nke na-adị jụụ n'ọnọdụ ọ bụla.
Alicia Jiménez-Bartlett ga-ekwu maka Petra Delicado na Granada Noir, mana ọ gaghị abụ, ọ bụ naanị onye edemede ga-ekpochapụ na mbipụta nke ememme a, jupụtara na nnukwu kpakpando.
Dị ka okwu ha si kwuo "Mpụ ga-abụ uche ya"
Maka ozi ndị ọzọ, pịa ebe a
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Genres » Black akwụkwọ » Granada Noir: Alhambra na-enwekwa mmasị maka akwụkwọ akụkọ mpụ.